आफु मर्दै छु भनेर कसरि थाहा पाउने ? यी संकेत हुन्छन मर्नु अगाडी जान्नुहोस - Gaule Media ::
Home/रोचक/आफु मर्दै छु भनेर कसरि थाहा पाउने ? यी संकेत हुन्छन मर्नु अगाडी जान्नुहोस
ramsharan१९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०६:२१
मान्छे हरु सधैं एउटा शब्दबाट डराउँछन्, त्यो हो ‘मृत्यु’ । मृत्यु कसैलाई पनि प्यारो लाग्दैन । तर एक न एक दिन सबैले मृत्युलाई अंगाल्नु पर्ने हुन्छ ।
मृत्यु अंगाल्नुपर्ने धुर्वसत्य थाहा भएरै कतिपयले आफ्नो मृत्युबारे जान्न चाहना पनि राख्छन् । त्यसका लागि ज्योतिषीकहाँ चिना देखाउनेदेखि अनेक उपाय अपनाउँछन् । तर हिन्दु धार्मिक ग्रन्थका अनुसार मानिसलाई उसको मृत्यु नजिकिँदै छ भन्ने संकेत भगवान (प्रकृति)बाट नै मिल्ने गर्छ । ती संकेतलाई चिन्न सक्यो भने मृत्यु नजिक आइसक्यो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।
– यदि कुनै व्यक्तिले अचानक चारैतिर कालो देख्न थाल्यो भने त्यो उसको मृत्यु नजिक आइसकेको संकेत हो ।
– यदि अचानक कुनै व्यक्तिको बायाँ हात लगातार एक हप्तासम्म फरफर्राउँछ भने पनि सम्झनुपर्छ कि ति व्यक्तिको मृत्यु नजिक आइसकेको छ ।
– यदि कुनै व्यक्ति गएको ठाउँमा काग र गिद्धहरु घुमिरहन्छन्, अथवा ती व्यक्ति भएको माथिबाट तीनभन्दा बढी गिद्ध एकसाथ उड्छन् भने पनि बुझ्नुपर्छ कि अब उनको मृत्यु हुनेवाला छ । (विभिन्न हिन्दु धार्मिक ग्रन्थहरुबाट साभार)
सुगाले ‘चपायोे’ लाखौं डलरको ‘ब्रोडब्यान्ड केबल’, कम्पनी हैरान
१९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०१:५९
२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०६:४४